श्रीमानको लिङ्ग काट्ने महिलाले प्रहरी चौकीमा दिईन यस्तो अच्चमको बयान ! |
श्रीमानको लिङ्ग काट्ने महिलाले प्रहरी चौकीमा दिईन यस्तो अच्चमको बयान !
२०७५, २३ जेष्ठ बुधबार १२:२६ June 6, 2018 ताजा खबरसमाचार
काठमाण्डौ : आफ्ना बालबच्चाकै अगाडि श्रीमानले मदिरा खाएर आवेगमा बलात्कार गर्न खोजेपछि भारतकी एक महिलाले श्रीमानको लिङ्ग नै काटिदिएकी छिन् । आफूलाई मातेर अति गर्न खोजेपछि त्यसो गर्नुपरेको उनले प्रहरीसामु बयान दिएकी छिन् । उनीविरुद्ध प्रहरीले हत्याको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ ।